တရုတ်နိုင်ငံက ဂျပန်နိုင်ငံ အနိုင်ရအဖွဲ့အသစ်နှင့် နက်ရှိုင်းသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်သွားရန် အသင့်ရှိကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြော - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဂျပန်နိုင်ငံ အနိုင်ရအဖွဲ့သစ်နှင့် နှစ်နိုင်ငံကြား နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက် လေးရပ်တွင် စည်းမျဉ်းများချမှတ်ရေး စောင့်ကြည့်ရေး၊ အပြန်အလှန် အကျိုးကျေးဇူးရှိပြီး လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းရေး မှန်ကန်သော လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး အားကောင်း၍ တည်ငြိမ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရေး လုပ်ဆောင်သွားရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အနိုင်ရပါတီ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (LDP) ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာသော Fumio Kishida ၏ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် ဟွာချွမ်းရင်က နေ့စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
China ready to deepen cooperation with Japan’s new ruling team: spokesperson
BEIJING, Sept. 29 (Xinhua) — China is willing to work with Japan’s new ruling team to observe the principles set out in the four political documents between China and Japan, deepen mutually beneficial and practical cooperation, and promote the healthy and stable development of bilateral relations along the right track,aForeign Ministry spokesperson said Wednesday.
Hua Chunying made the remarks atadaily news briefing in response toaquery on Fumio Kishida’s victory in the election to become president of Japan’s ruling Liberal Democratic Party (LDP) on Wednesday. Enditem
File photo of the Chinese Foreign Ministry’s spokesperson Hua Chunying. (Xinhua)